Akondro avy eto Madagasikara: nanana ny toerany teo amin’ny tsena eoropeanina | NewsMada
Tany amin’ny taona 1961, efa nanondrana akondro vokatra any amin’ny tsena eoropeanina ny avy eto Madagasikara. Tsy latsaky ny 20 000 t ny naondana tamin’izany avy any atsinanan’ny Nosy manontolo. Ny taona 1966, tafakatra 35 716 t ny vokatra naondrana ; nisy fotoana nampihena izany teo amin’ny 14 000 t, noho ny andro ratsy. Saingy tamin’ny Repoblika voalohany ihany, niezaka nanarina ny sehatra fambolena akondro ny fanjakana, nametraka politika manokana nidirana amin’ny tsena Eoropeanina. Nisy sambo natao mpitatitra fotsiny, nandray ny vokatra teo Toamasina isaky ny telo herinandro.
Nanana ny toerany manokana ny akondro avy eto Madagasikara teo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Na henjana aza ny fifaninanana tamin’ireo avy any amin’ny firenen-kafa, nanamafy ny minisiteran’ny Fambolena tamin’izany fotoana fa tsy tokony hamaivanina ny famokarana akondro. Natao ny fanadiahadiana rehetra ho fanatsarana sy fampitomboana ny vokatra. Navahana ny fikajiana azy ho an’izany varotra ivelany izany.
Tombony lehibe, saika ahitana voly akondro ny faritra maro eto amin’ny Nosy afa-tsy ny any Atsimo. Marihina anefa fa any atsinanana ihany ny ahitana ireo karazana akondro fanondrana, sady manamora ny fitaterana azy eny amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina. Tena mpamokatra izany ny any Vavatenina, Iazafo, Onibe, Ivoloina, Ivondro, Ambinanony, Brickaville, Anivorano. Tsy nahitana karazan’aretina any amin’ireo tanàna ireo, izay nisy fototra akondro antapitrisany. Voankazo « malemy » mila tsara fiarovana. Amin’izao fotoana, tsy fantatra mazava hoe, firy taonina ny aondran’i Madagasikara raha misy ?
36 % sisa ny avy any Toamasina
Nahitana fivoarana ny voly akondro hatramin’ny 1975, efa nahatratra 400 000 t. Tsara tohana ara-teknika, indrindra ho an’ny varotra ivelany nankany Frantsa. Nihena tsikelikely ny vokatra avy eo, tsy tafarina hatramin’izao. Raha nanjifa 60 kg isan-taona ny olona iray teto an-toerana ny taona 70, latsaka 18 kg isan-taona sisa izany ankehitriny. Teo anelanelan’ny taona 1976-1986, ny faritanin’i Toamasina namatsy ny 51 % ny fanjifana eto Madagasikara ; nanomboka ny fiandohan’ny taona 2000, nihena 36 % sisa izao ny avy any Toamasina ihany, manodidina ny 61 000 t ho an’ny tsena eto an-toerana.